Yemauto stud purazi nenzvimbo dzayo muSpain | Noti Mahosi
Yemauto stud purazi nenzvimbo dzayo muSpain
Jenny monge | | Mabhiza, Mabhiza emhando, Kuberekerwa
Uyo anozivikanwa saiye "Yeguada Militar" inotanga kuSpain mushure mekuchinja kwenzanga neupfumi kwakagadzirwa neHondo yeRusununguko. Nguva yezvematongerwo enyika yakatanga iyo yaizopedza iyo Old Regime, ichitungamira ku kuda kunyangarika kwemapurazi mahombe eruware yakanga iri munyika. Izvi zvakakonzera dambudziko rekupa mauto.
Iwe unoda kuziva here zvakaitika?
Tatarisana nemamiriro ezvinhu aya, muna 1864, hurumende yaIsabel II, yakaburitsa a Royal Chirevo kuburikidza nekurongwazve kwekuberekesa mabhiza kwakapihwa kuCavalry Weapon yenyika yeSpain.
Imwe yematanho ekutanga avakatora yaive kugadzirwa kwe stallion mari. Gare gare, muna 1893, yakagadzira purazi repurazi raizotora hunhu uye zvakakosha zvinangwa kugadzirisa kushomeka kwemabhiza zvehondo. Panguva imwechete yavakashandira kugadzirisa zviripo zvirimwa. Yekutanga dzimbahwe revatasvi vemabhiza aya raizove Córdoba.
1 Mahosi Ekuberekesa Mahoro uye Masuniti muSpain
1.1 Wemauto Horse Kuberekesa Center yeEvila
1.2 Écija Horse Kubereka Yemasoja Center
1.3 Jeréz Horse Kubereka Yemasoja Center
1.4 Lore-Toki Wemauto Mudzidzi
1.5 Caballar de Mazcuerras Yemauto Ekuberekesa Center (Cantabria)
1.6 Caballar de Zaragoza Mauto Ekuberekesa Center
Mahosi Ekuberekesa Mahoro uye Masuniti muSpain
MuSpain tinogona kuwana nhanhatu nzvimbo dzeFAS dzekurera mabhiza, pamwe neakaongororwa marabhoritari eCórdoba.
Ngatitaurei zvishoma nezve idzi nzvimbo:
Wemauto Horse Kuberekesa Center yeEvila
Pakutanga nzvimbo iyi yaive yakagadzirwa pasi pezita re «6th Stallion Horse Depot» neRoyal Order yaMarch 22, 1905, iri muguta reAlcalá de Henares.
Papera makumi emakore, chikamu chakakurumbira chakawedzerwa muTrujillo (Cáceres) uye zita rakashandurwa rikava «Deposit of Stallions of the First Livestock Zone».
Muna 1931, mabasa ekuberekesa mabhiza aya akazove chikamu cheMinistry of Development, achisiya Ministry yeHondo. Zvisinei hazvo zvaizotora nguva yakareba kuti udzokere kunoenderana ne Ministry of War. Kubva ipapo yakaramba ichidanwa nemazita akasiyana akateedzana. Pakupedzisira yakawanikwa muEvila kugadzirisa muEl Padrillo purazi.
Écija Horse Kubereka Yemasoja Center
Nhoroondo yenzvimbo ino Inogona kuteverwa kumashure kuna 1946, apo chikamu cheMares de Tiro del Norte chakagadzirwa muPau (Gerona) uye kuti zvaienderana neCórdoba. Kune izvi, gumi nematatu ardennes mares uye gumi nematatu avo vakayambuka nemaBretoni.
Kubereka kuronga mabhiza zvaive zvakakosha kuti uve wakazvimiririra kubva kunze kwenyika, kuwedzera pakuve nekugadzirwa kwemombe kwebasa rinorema.
Aya mares aive ivo vaizopinza zvishoma nezvishoma Bretonn uye postier-Breton, iyo yakatanga kuvharwa nemabhiza kusvika pamhedziso yekuti idzi nhangemutange ndidzo dzakanyanya kugadzirirwa nemamiriro ekunze eSpain.
Muna 1990 kubereka mabhiza kwakagadzirwazve, kufambisa Chikamu cheMabhiza kuenda kuÉcija.
En 2007 Écija Horse Kubereka Masoja Maseru akagadzirwa, achiunza pamwechete Écija Stallion Depot uye Écija Mauto Stud. Pakati panopihwa mamishinari ekuchengeta mabhiza munzvimbo dzakakwana, nguva nenguva vachiita bvunzo dzekubereka uye dzekubereka, vachikurudzira kuendeswa kweHurumende Parade, vachiita zvinodiwa nevaberekesi uye neCity Council, uye vachikurudzira kuendeswa kwemabhiza kune varimi vega avo sangana nezvimwe zvinodiwa, panguva yekuvhara nguva.
Jeréz Horse Kubereka Yemasoja Center
Iri nzvimbo rakagadzirwa muna 2006 pamwe nekubatanidzwa kweYeguada Militar uye Depósito de Sementales de Jeréz. Saizvozvo, mombe dzese uye zviwanikwa zvemaviri izvi zvaizove chikamu cheMauto Center yeCría Caballar de Jeréz de la Frontera
Iyo Jeréz Yemauto Stud yakavambwa mu1893 nechinangwa chekusimudza vana vanogona kuvandudza hunhu uye mamiriro emaSaddle Mahosi eHondo Remonition. Uye zvakare, ivo vaidawo kuita zvakafanana nemhando dzekumhanya uye dzekupfura. Iyo purazi yepurazi yakatanga kuiswa muDhehesa de Moratalla muHornachuelos (Córdoba).
Munguva yeRegency yaMaría Cristina, takapindura pakutanga kwechinyorwa kuti iyo Stallion Deposits, mumwe wavo akapiwa basa Jerez muna 1841.
Lore-Toki Wemauto Mudzidzi
Rutsigiro kubva kuhutungamiriri hwemauto hwekuberekesa bhiza reChirungu Rakakwenenzverwa muSpain pakutanga rakapfupika, kusanganisira mares mashanu chete erudzi urwu muchikoro chemauto cheCórdoba kusvika kumagumo ezana ramakore rechiXNUMX. Iyo Mambo Alfonso XIII aifarira kwazvo maChirungu Kukwikwidzana uye kumhanya kwemabhiza. Naizvozvo mu 1921, iyo Chirungu Yakakwenenzverwa Chikamu yakavambwa muMarquina (Guipúzcoa), yakabhadharwa kuCount of Urquijo. Nekusvika kweRepublic muna 1931, mijaho yemabhiza yakatambura kuzorora uye chikamu chitsva ichi chaiendeswa kuCordovan Military Stud.
Muna 1940, General Franco akapa kuiyi dhizaini uye batch yeKukwanisika mares eChirungu, yaive chipo kubva kuFrench Subject. Chokwadi ichi, chakaitwa Chikamu cherudzi urwu chakagadzirwazve, ichiendesa mhuka imwechete kuLasarte muna 1941, kunotora purazi reLore-Toki., iko iko iko kusipo iko iko purazi repurazi raAlfonso XIII anga ariko.
Hurumende yakawana purazi iri kubva kuvadyi venhaka yaAlfonso XIII kuwedzera kune vakavakidzana veOllo neAmassorrain, ichibatanidza ivhu rese repurazi reruwa saLore-Toki.
Ipo zvese zviri pamusoro pazvaiitika, iyo Mujaho block yeYeguada Militar, yakavakirwa muMadrid.
Parizvino iyo Lore-Toki Yemauto Stud uye mujaho wakagadzikana unotsamira pairi, ramba uchiita basa ravo kukurudzira kuburitsa Kwakakwana Chirungu muzvivakwa zveSan Sebastián neLasarte. Zvakare mu2008 Kuberekesa kweAnglo Arab bhiza kwakabatanidzwa.
Rudzi rweMabhiza Akakwana
Caballar de Mazcuerras Yemauto Ekuberekesa Center (Cantabria)
Waive Yakagadzirwa muna 2006 kuburikidza nekubatanidzwa kweLore-Toki Military Stud, iyo Ibio Yemauto Stud uye iyo Santander Stallion Depot. Nekudaro, iyo Lore-Toki Yemauto Stud yaizove nzvimbo yakazvimiririra uye ndosaka takambotaura nezvazvo kare.
Iyo Santander Stallion Deposit yakagadzirwa muna 1920 semhedzisiro yekuitwa kweshanduko muCría Caballar chirongwa muna 1919.
Yeguada Ibio yakasikwa mu1972 nekutengwa neHurumende yepurazi inonzi "Casa de la Guerra" muMazcuerras (Cantabria). Iyi purazi yakakura kubva ku30 Ha. Kusvika 85 Ha.
Parizvino muMaziscuerras, kune nzvimbo yekuberekesa mabhiza nemaStallion eaya marudzi eSpanish ane hunhu hweMitambo, Purebred Spanish, Anglo-Arab, Hispano-Arab, Purebred Arab, Breton uye Hispano-Breton. Mbavha dzakakwenenzverwa kusvika panguva yavanodzokera kuRoyal Guard, akasiyana MaCentre emauto eHorse Breeding, Civil Guard uye Mapurisa eNyika.
Caballar de Zaragoza Mauto Ekuberekesa Center
Iri nzvimbo ndeyake Autonomous Mutumbi weBazi Rezvekudzivirira «Kuberekesa Mabhiza Evarwi». Yaive iri muTorre de Abejar yekumaruwa estate kuGarrapinillos.
Iyo purazi mukuwedzera kune mabasa ane chekuita nekurera kweequines, Iine nzvimbo dzekufudza maCatalan mares nembongoro.
Pakutanga, yaive Deposit nhamba 5 yeStallion, iine mazita akasiyana kusvika yazvino yaakagamuchira muna 2007. Semumaitiro apfuura, Stallion neMare Depots zvakabatanidzwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Noti mabhiza » Mabhiza » Yemauto stud purazi nenzvimbo dzayo muSpain
Jamelgo: zvazvinoreva uye mashandisiro ayo
Spanish Equestrian Federation: Mavambo uye Mabasa